Raha misy ny manontany,
Nahoana no mitomany ;
Ny tsara tokony ho fantany,
Tsy misaraka amin'izany.
Raha misy ny tsy mety,
Ireo toerana efa voatety,
Saika hanaovana ny fety ;
Aleo mihitsy tsy arenty,
Hiandrasana ny metimety.
Raha misy mijery vilana,
Ny fiainana mitongilana ;
Ny atao efa manahirana,
Mbola be fingampingana,
Tsara ny tsy mihorirana.
Raha misy ny manakora,
Ny zava-bita moramora ;
Satria tsy ampy ny akora,
Avelao eo ho fotsy rora,
Miandry varoboba mora.
Raha misy koa ny andro,
Tsy misy tana-masoandro ;
Mbola sarotra ny mitandro,
Sao ho raraka ny nahandro,
Izay vao tena lany andro.
Raha misy ny fanantenana,
Aleo manao ny tsy ialana ;
Mba ny tany toa Kanana,
No itoerana fa tsy ialana,
Ary atao izay ahatamana.
Raha misy ny mila kisa,
Amin'ny olona analin-kisa ;
Tsara ihany ny tsy mitanisa,
Mba tsy hisian'ny disadisa,
Ka ny tontolo ho paradisa.
Raha misy, iriana hisy foana,
Ny fitahiana mandava-taona ;
Mba ho voky fa tsy ho noana.
Hiadana hiandry ilay fotoana,
Hiavian'i Tompo eo anoloana.
08 Aprily 2019
Sokajy : fananarana, fiainana, Fiaraha-monina